Izindaba - Isilawuli sephedi ye-NEON JOYCON kwesokunxele nakwesokudla esinebhande lasesihlakaleni
1. Ukuhambisana okuphelele: Idizayinelwe i-Nintendo Switch-indawo ekahle ye-Switch Joycon;isethi efanayo yezinkinobho zokuqala ze-Joy-con;isandla ngasinye singasetshenziswa ngokuzimela noma sixhunywe kukhonsoli ukuze sisetshenziswe kumodi ephathwayo;Impahla ye-ABS engasheleli futhi engasheleli.I-Neon Blue enethezeke ngokwe-ergonomically kanye ne-Neon Red Joy Pads.
2. Idizayini emisha yokulawula ukunemba okuphezulu: Isilawuli ngasinye sinesethi egcwele yezinkinobho, engasetshenziswa njengesilawuli esizimele, futhi isilawuli ngasinye siqukethe i-accelerometer nenzwa ye-gyroscope, okwenza kube nokwenzeka ukulawula ngokuzimela ukunyakaza kwesokunxele nakwesokudla.Khomba futhi udubule ngokuqondile.
3. Ukufanisa okwenziwe abantu nokushesha: Isilawuli semisebenzi eminingi sihlinzeka abadlali ngezindlela ezihlukahlukene ezintsha nezimangazayo zokudlala.Uxhumano olungenantambo lwe-Bluetooth, isignali ezinzile;ukuxhuma kabusha okuzenzakalelayo;impilo yebhethri elishajekayo cishe amahora ayi-10, amahora angama-20 lapho udlala imidlalo ngaphandle kokudlidliza;ukushaja nge-console noma i-mirco usb.
4. Sicela uqaphele:
(1) Lokhu kuyindlela ekahle yokuthatha indawo ye-3rd Party Joy-con;
(2) Ayikho i-NFC (amiibo) noma i-IR Motion;
(3) Ayifanele igobolondo noma isibambo;
(4) Lapho uNintendo ebuyekeza ikhonsoli, idinga ukuxhuma ku-PC ukuze ibuyekeze isibambo
· Kulula ukuyisebenzisa futhi kulula kakhulu ukubhanqa.
· Ergonomic futhi unethezekile Neon Blue kanye Neon Red Joy Pads
· Yabelana nabangani futhi ujabulele isenzo sabantu ababili emidlalweni esekelwe.
· Isilawuli ngasinye sinesethi ephelele yezinkinobho, ezingasetshenziswa njengesilawuli esizimele.
· Goba ukuze ulingane izandla zakho kangcono futhi uhambisane neNintendo Switch njengokungena esikhundleni seJoy Cons.
·Ukudlidliza okukabili nokulawula ukunyakaza kwenza umdlalo ugxile kakhulu.Noma ngabe udlala ubheke phezulu noma uvundlile, lezi zisasebenza kahle.